Tun Tun's Photo Diary: Patong Beach, Phuket #3 (Night Market)
Beside the Wet Market or Behind the Jungceylon shopping mall, there is Night Market which selling variety of local food. Since it is street food stalls, the price is very cheap and so many choices.
This stall is run by Mon (Burmese) Family. I boughtafew packets of dish and rice for dinner. The dishes were so cheap and tasty.
I like this market compared to the night market in Bangkok. Here if you take away the food, they don't charge for disposal boxes. In Bangkok, I encountered some vendor chargeafew bahts for the take away food.
ငပိထောင်း၊ ငပိရည်၊ ငံပြာရည် ကြော်၊ ပန်ထွေဖျော် အကုန်ရတယ်။ အောက်မှာ အတို.အမြုတ်လဲ ၀ယ်လို.ရတယ်။ ဒါပေ့မယ်။ ဟိုမြန်မာထမင်းဆိုင်က အတို.အမြုတ်တွေ ပေးလိုက်တော့ ၀ယ်စရာမလိုတော့ဘူး။ ငပိထောင်း တစ်ထုပ် ၀ယ်လာတယ်။ မြန်မာငပိထောင်းနဲ. ဆင်တယ်။ နည်းနည်းတောင် ပိုစားကောင်းနေသလားလို.။
ပုဇွန်အစိမ်းသုပ် တထုပ် ကို ဘတ်၅၀။ အဆန်းမို.လို. ၀ယ်စား ကြည့်တယ်။ ကြက်သွန်မိတ်တွေ နဲ့ သုတ်ထားတာ ကောင်းမှကောင်း။ ထမင်းနဲ. အရမ်းမြိန် ပါတယ်။ ဒါပေ့မယ် စားနေတုန်း လျှာ နဲ. ပုဇွန် ခေါင်းနဲ.ထိုးမိတာ တော်တော် အီသွားတယ်။ ငတ်တာကိုး ခံပေါ့။ နောက်နေ. တွေ မှာ ထပ်ဝယ်မစားတော့ဖြစ်ဘူး။
According to this market, I think meat price is cheap in Thailand. As you can seealot of vendors selling all kind of meat with very low price.
အဲ့ငါးကင် က ဗိုက်ထဲမှာ စပါးလင် အချောင်းလိုက် သွတ်ထားပြီး အပေါ်က ဆားနဲ.ပြာ အုတ် ထားတာ။ စားလို.ကောင်းတယ်။ Patong မှာ တကောင်မှ ဘတ်၆၀ ဘဲ။ Bangkok မှာဆို ဘတ် ၈၀၊၁၀၀ ပေးရတယ်။
ပုဇွန်ဆိတ် အစိမ်းသုတ် ဒါ နောက်တဆိုင်။ ပူစီနာ၊ ကြက်သွန်မိတ် ၊ ကြက်သွန်နီတွေနဲ. သုတ်ထားတာ။ ကြုံရင် ၀ယ်စားကြည့် တထုပ် ဘတ်၅၀ အရမ်းစားလို.ကောင်းတယ်။
အဲ့ဒီ ဆူးပုတ် ၊မိူ ၊ ဟင်းရည် အရမ်းမိုက်တယ်။ ဘေးက ဗန်းထဲက ဟာက ပျားကောင်နဲ. ပျားဥတွေ ၀ယ် ပြီးဆိုမှ ဟင်းရည် ထဲ ထည့်ပေးတယ်။ အရမ်းစပ်ပြီး အရမ်းသောက်လို.ကောင်းတယ်။
ဒါက သဘောင်္သီးထေင်းဆိုင်။ ဒီက သဘောင်္သီးထောင်က ဂဏန်းတွေ အကောင်လိုက် အစိမ်းလိုက် ထည့်ထောင်းတာ။
ဟင်းရည် ဆိုင်။ ဟင်းရည်တွေ အစုံ ရတယ်။ ကြံမဆိုင် ဟင်းရည် လည်းပါတယ်။
ပထမတရက်က အထာမနှပ် လို. စားသောက်ဆိုင်မှာစားတာ ဘတ်၁၀၀၀ လောက်ကျတယ်။ သိပ်များများစားစား မမှာပါဘူး။ အခု ဒီဈေးမှာ ဘတ်၄၀၀ လောက်ဖိုးလောက် ပဲ ၀ယ်တာ ပါဆယ်ထုတ်တွေ များလွန်းလို. ဓါတ်ပုံတောင် မနည်း အမိအရရိုက်ယူရတယ်။ သယ်ရတာတွေ များနေလို.။ ဟိုတယ်ရောက်ရင် ဗိုက်ပေါက်၊ အန်ထွက် အောင် စားလို.ရပါတယ်။ ;)
at 2/23/2011 10:00:00 PM
Labels: Food, Phuket, Thai Food, Thailand
They like to use coloring agents, attractive.